China Nnukwu Mast Lighting China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nnukwu Mast Lighting - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nnukwu Mast Lighting)
100 Watt UFO High Bay Lighting 5000K 1. 100W UFO ulo oru highbay na-eji na ulo oru, ụlọ nkwakọba ihe, Indoor ámá, ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, supermarkets Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. 100W buturu ufo lampsali bụ ọkaibe ọhụụ. Obere na olu dị ntakịrị, na-adigide ogologo ma kwụsie ike....
Ewu ọkụ Mast Light 500W 65000LM
Nsonaazụ a dị elu 500W Hasọ Mast Lighting nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Highlọ Mkpuchi Lightzọ Mast dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ Mast a na South Africa bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri....
500W Led Light Mast Lighting Listi Mpempe
Esemokwu a dị elu 500W High Mast Led Street Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Mbara Anyanwụ Led dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Ndepụta Ling High Mast Lighting Linging a bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba...
System 600W High Mast Lighting Design System 78000lm
Nke a 600W High Mast Light Design na 78 78lumens. Ugo Ogologo Akwa Akwa dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a dị elu nnukwu Mast Light System bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Site na dochie HIP / HID / MH bulbs / fixtures...
600W Stadum Lighting Design 5000K
Nke a 600W Atlanta Stadium Lighting dị 78,000lumens. Market Market Lighting dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a na-emepụta Egwuregwu Okirikiri Cricket bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Site na iji dochie anya HIP / HID /...
Stadium High Mast Led Lighting 500W 65000LM
Nnukwu ọkụ a na-enwu ọkụ 500W Busch Stadium nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ọkụ n'egwuregwu Musco dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ egwuregwu a na-enwu enwu bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba...
Nnukwu Mast Lighting Nnukwu Light Mast Lighting Nnukwu Mast Light 1000w 25m Oke Mast Lighting Nnukwu Mast Led Street Light Nnukwu Mast Led Retrofit Nnukwu ọkụ Warehouse Lighting Dols High Mast Lighting